IIGARAJI EZIPHATHWAYO (ISIKHOKELO KWIINDIDI, IZIXHOBO KUNYE NEEKITI) - IIGARAJI
Eyona Iigaraji Iigaraji eziphathwayo (Isikhokelo kwiindidi, izixhobo kunye neekiti)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu kwiigaraji eziphathwayo kubandakanya iinkcukacha malunga neegaraji vs izithuthi, iintlobo zezinto, ubungakanani obudumileyo kunye neekiti ze-DIY.
Indawo yokugcina iyimfuneko kulo naliphi na ikhaya. Yile ndlela amakhaya anendawo eyaneleyo kungekuphela yokuba umntu aphile kodwa nokusetyenziswa kombutho kunye nokongezwa kwendawo yolonwabo ngokunjalo. Ngamanye amaxesha, nangona kunjalo, esi sithuba kufuneka senziwe.
Umzekelo, usenokungabinayo igaraji epheleleyo yokukhusela izithuthi zakho kunye nezinto ngokubanzi kwaye usenokungayifuni. Olunye ukhetho kukuzama igaraji ephathekayo ezisa izibonelelo zayo kwitafile njengokulula kunye nokuhamba. Iigaraji eziphathwayo ezifumanekayo zime njengezinto eziluncedo kubanini bamakhaya abafuna indawo eyongezelelweyo.
Yintoni igaraji ephathekayo?
IGaraji ePhathekayo kunye neCarport
Izinto eziphathekayo zeGaraji
Ubungakanani boDumo eGarage
Ixabisa malini ukwakha iGaraji / iPortport
Izixhobo zeGaraji eziphathwayo
Ukumisa iGaraji ePhathekayo
Umgangatho wegaraji ephathekayo
Iiankile zangaphantsi / amatye obunzima
Garage yeeMoto eziPhathwayo
Ii-FAQ zeGaraji ephathekayo
Zinde Kangakanani Iigaraji Eziphathekayo?
Ngaba ndiyayidinga imvume yemoto ePhathekayo?
Eyona Garaji iphathekayo
Eyona Garaji iphathekayo yoMthwalo weKhephu
Iigaraji eziphathwayo zinenjongo efanayo negaraji eyakhiwe ngokupheleleyo. Ukubonelela ngendawo yokugcina izithuthi kunye nezinye izixhobo ezincinci onokufuna ukukhuselwa kwaye ukhuselwe kwimozulu embi.
Umahluko omkhulu phakathi kwegaraji ephathekayo kunye negaraji yemveli kukuba iigaraji eziphathwayo zezokwexeshana. Endaweni yokumiswa ngokusisigxina emhlabeni, igaraji ephathekayo yenziwa ngeepali zentsimbi kunye nesigqubuthelo esisuswayo. Xa ulungele ukuhambisa igaraji, konke okufuneka ukwenze kukuyithatha kwaye uyihlanganise kwakhona kamva xa uyifuna kwakhona. Le ndibano kunye nokuqhekeza kuhlala kuyilelwe ukuba ibe ngokuthe ngqo kwaye ingenabuhlungu kangangoko kunokwenzeka.
Xa ucwangcisa ubeko lweeyadi ungasebenzisa enye ephezulu Isoftware yoyilo lwegaraji iinkqubo zokujonga indawo ngaphambi kokuthenga nantoni na.
Eyona nto yahlulahlula phakathi kwegaraji ephathekayo kunye nendawo ekuma kuyo ikharforithi kukugubungela ubungakanani besakhiwo. Iigaraji eziphathwayo, ezifana neegaraji zesiko, zibonelela ngokugubungela ngokupheleleyo kwaye ziyilwe njengesakhiwo esipheleleyo. Kwelinye icala, izikhululo zeenqwelo moya zinophahla ngaphandle kweendonga. Ngaphandle kweendonga, ezi zikhundla zinika ukhuseleko olufanelekileyo kwizinto ezinje ngokugcina ikhephu eliwayo kwiifestile zangaphambili. Funda ngakumbi ngokwahlukileyo iintlobo zeengcango zegaraji yekhaya apha.
Zombini iigaraji eziphathwayo kunye nezikhululo zeenqwelo moya ziza ngobukhulu obahlukeneyo. Ezi zihlala zilinganiswa, ngokweyona migaqo ithe ngqo, kwinani lezithuthi abazibambayo. Izakhiwo ezizodwa okanye izakhiwo ezineemoto ezimbini okanye ezintathu zixhasa ubukhulu.
Iigaraji eziphathwayo ayilulo uhlobo lotyalo-mali. Endaweni yokuba kukho uluhlu olubanzi lweemodeli kunye noyilo abaninimzi abanokukhetha kulo. Enye yezona zinto zibalulekileyo ezinokuthi zitshintshe uyilo lwegaraji ephathekayo zizinto ezenziwe ngazo.
Jonga le kit igaraji iphathwayo kuyo IAmazon
Ilaphu iigaraji eziphathwayo azibhekiseli kwilaphu elifanayo kwiingubo zakho. Endaweni yokuba ezi zinto zenziwe ngezinto ezifana ne-polyethylene okanye iseyile eyomeleleyo. Ezi zomelele ngokwaneleyo ukuba zingakrazuki ngokulula phantsi koxinzelelo okanye ukuwa phantsi komthwalo onzima wobunzima. Zisebenza kakuhle ekugcineni ukufuma ngaphandle kwaye zihlala zibiza kakhulu kunezinto ezisindayo.
izimvo zesango elinamaxabiso aphantsi
Oko bekutshiwo, kukho ezinye izinto eziwa phantsi ngokuthelekisa. Umzekelo, izinto ezinje ngentsimbi kunye nealuminium yomelele ngokungaguquguqukiyo kwaye izinzile kunezigqubuthelo zelaphu kuba ziqinile kunezinye zazo.
Isinyithi yinto eyaziwayo yokuba yenye yezona zinto zomeleleyo zisetyenziswa kwizinto zokwakha. Akunakwenzeka ukuba yonakaliswe nakwiimeko ezinzima kwaye iya kuhlala ixesha elide. Le nto ayifuni nqanaba eliphezulu lokuyigcina ikwimeko ephezulu ekuhambeni kwexesha.
Xa ishiywe inganyangwa, isinyithi sinokuwela kwimeko yokubola kunye nomhlwa kodwa unyango oluthile lunokunceda. Isinyithi asiyaziwa ngokuba sesona sixhobo sithandekayo sisebenzisa umbulelo kwinto eyahlukileyo kwaye ngamanye amaxesha imbonakalo yemizi-mveliso.
Ishedyuli yeAluminiyam inezibonelelo ezininzi ezifanayo njengeeshedi zentsimbi kodwa ikwabandakanya umahluko ophambili. Kwelinye, inqabile ngokwendalo kumhlwa kunye nokubola. Oku kwenza ukuba kube lula ukugcina kwimeko emanzi kunentsimbi.
Inqaku elinezinto ezintle nezingalunganga kuyilo olulula lwealuminium. Oku kwenza ukuba kube lula ukuyisebenzisa kodwa yenza ialuminium ibe lula kunentsimbi. Ke, ukuba kuya kufuneka usebenzise igaraji kwimozulu embi njenge-hale, kunokwenzeka ukuba ubone iimpawu zomonakalo.
Inkangeleko yegaraji ephathekayo yomthi yenye yeenzuzo zayo ezinkulu. Umthi unokwenziwa ngeendlela ezahlukeneyo kwaye iintlobo ezahlukeneyo zomthi ezisetyenzisiweyo zinokutshintsha inkangeleko yegaraji eziphathwayo okanye nayiphi na imveliso yokuchwela.
Uya kufuna ukugcina ngononophelo iinkuni. Eyona nkxalabo inkulu yokukhathazeka kukunyanga iinkuni kwizitshabalalisi. Ukugcwala kweembovane zomchweli okanye iintubi kunokupela ukuqala kokuphela kobume bokhuni.
Xa uceba ukuthenga okanye ukwakha igaraji ephathekayo, kuya kufuneka uqwalasele ukuba ungakanani igumbi onalo negumbi olifunayo. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, bahlala bechazwa njengabodwa, ezimbini, okanye iimoto ezintathu. Nangona kunjalo, imilinganiselo ngqo ibalulekile xa umisela indawo oyifunayo.
Umgangatho, igaraji enye ephathekayo inyathela i-12 yeenyawo ububanzi ngeenyawo ezingama-20 ubude kunye ne-9 yeenyawo ububanzi umnyango. Iigaraji ezinkulu zineenyawo ezili-18 ububanzi ezanele uninzi lweenqwelo. Kwigaraji yeemoto ezimbini ephathekayo, obu ububanzi bufikelela kwiinyawo ezingama-24 kodwa iinyawo ezongezelelweyo ezi-6 ngumbono olungileyo ukuba ufuna indawo yokugcina eyongezelelweyo. Iigaraji ezintathu eziphathwayo zii-26 ukuya kwi-30 iinyawo ububanzi kwaye zibonelela ngeyona ndawo. Funda ngakumbi malunga ubungakanani bomgangatho wegaraji Apha.
Izikhululo zeenqwelo moya zeza ngexabiso lokufaka phakathi kwe-6,000 yeedola kwizibuko leemoto ezimbini. Uluhlu olupheleleyo lweendleko zihlala ziwela ngaphakathi kwe- $ 4,000 ukuya kwi-7,100 yeedola.
Iigaraji eziphathwayo ziza ngeendleko ezahlukeneyo kuxhomekeka kwinto oyisebenzisayo. Amachweba egaraji alula angathengwa ngaphantsi kwe- $ 1,000. Iimodeli ezenziwe ngezinto ezinjengokhuni ezimodareyithwe emva kwegaraji zemveli zinokuwela ngaphakathi kuluhlu lwama- $ 4,500 ukuya kwii-13,000 zeedola.
Ngokuthelekisa, umndilili wegaraji zeemoto ezimbini ngokwesiko zibiza phakathi kwe- $ 7,500 ukuya kwi- $ 14,200 yokwakha. Igaraji yeemoto ezintathu inokuxabisa ukuya kuthi ga kwi-42,700 yeedola.
Jonga le kit igaraji iphathekayo kuyo IAmazon
Xa unomdla wokongeza igaraji ephathekayo ekhayeni lakho, uneendlela ezimbalwa onokukhetha kuzo. Ukuba ungumntu othanda ubuchule be-DIY, ungazenzela ngokwakho. Unokwenza isivumelwano nomntu ukuba akwenzele igaraji ephathekayo.
Umhlaba ophakathi uyila into ngokwakho kwaye uyilelwe wena kukutyala imali kwigaraji ephathekayo. Ezi zikunika yonke into oyifunayo kodwa zikuvumela ukuba ubeke iziqwenga ngokwakho. Iikiti ezinje ngezi ziza ngobukhulu obahlukeneyo kunye nezitayile, ngenxa yoko usenokuninzi okwahlukileyo ukukhetha phakathi kokutshatisa ukuthanda kunye neemfuno zakho.
Iigaraji eziphathwayo azihlali nje emhlabeni kungekho nto ziyimisayo endaweni yazo. Endaweni yoko, kufuneka babethelelwe kwindawo ebekiweyo. Oku kuqinisekisa ukuba ayiwi okanye itshintshe naxa imozulu ibaxekileyo.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile ukuqinisekisa ukuba ukhusela igaraji yakho ngokuchanekileyo kukujonga imiyalelo yomenzi. Ngaphandle koko, unokutyala imali kwiihange ezongezelelweyo ezenzelwe iigaraji eziphathwayo. Unokumisa nje iankile endaweni yayo, njengaxa ubeka intente. Nokuba zifakiwe ezi ankile, ayithathi ekuphatheni igaraji kuba inokususwa nanini na ifuneka.
Iigaraji eziphathwayo azikho ngaphandle kwezixhobo zazo eziluncedo nazo. Nokuba zibandakanyiwe okanye zongezwa ekuthengeni, ezi zinto zoncedo ziya kongeza ekusebenzeni kwegaraji yakho ephathekayo.
Ngelixa iigaraji ezininzi eziphathwayo, xa kuthelekiswa nezikhululo zeenqwelo moya, zineendonga kunye nendawo yokuhlala ephezulu. Nangona kunjalo, ayizizo zonke ezinomgangatho owakhelweyo kunye nazo.
Iigaraji eziphathwayo ezinemigangatho ziza nezibonelelo ezimbalwa ezibalulekileyo. Olona ncedo lukhulu kwinqanaba elongezelelweyo lokhuselo. Ukuba unomgangatho wegaraji, akunakufane kwenzeke ukuba uhlupheke kumphezulu omanzi wokuseka igaraji emva kwemozulu embi. Ngelixa oku kunokuba kungabalulekanga ukuba ugcina kuphela isithuthi sakho, kodwa kunokuba luncedo kakhulu xa ugcina ezinye izinto ezinjengeebhokisi kwigaraji ephathekayo.
Sele sigubungele ukuba iigaraji eziphathwayo kunye nezikhululo zeenqwelomoya azinakushiyeka zingafakwanga zilungiselelwe xa sele zimisiwe. Ngaphandle kokusekwa ngokufanelekileyo, igaraji inokuthi ihambe endaweni yayo. Oku kuyinyani ngakumbi xa usebenzisa igaraji kwiimeko zemozulu ezimbi.
UJason statham rosie huntington-whiteley utshatile
Yile nto iiankile zomhlaba kunye nobunzima obenzelwe zona. Ezi zixhobo zilapha ukuqinisekisa ukuba igaraji yakho ephathekayo ikhuselekile ngokukhuselekileyo kodwa ayongezi inqanaba lokusetyenziswa kwegaraji. Xa ulungele ukuhamba okanye ukugcina igaraji, ezi zinto zinobunzima kunye neeankile zinokususwa zitshintshwe. Iiankile zangaphantsi zihlala zenziwe ngentsimbi ehlanganisiweyo ukukhusela kwindalo engaphandle ngocingo kunye nokubamba ukukhusela uphahla lwesakhiwo.
Ngokwemvelo, iigaraji eziphathwayo zilula. Oku kwenza ukuba kube lula ukuseta kunye nokuthatha ezantsi xa ukulungele kwaye kugcina ukugcinwa koxinzelelo ngaphandle koxinzelelo. Okwangoku, oku akuthethi ukuba kuya kufuneka uphile ngaphandle kwezinto ezongezelelekileyo kwigaraji yakho ephathekayo ukuba unomdla kuzo.
Isixhobo esifana nezixhobo zombane, ewe, ezikuvumela ukongeza umbane kwigaraji yakho ephathekayo, ziya kukunceda ukongeza ezi zinto ziluncedo. Oku kunokuba luncedo ngakumbi ukuba ucwangcisa ukusebenza kwigaraji ukuze ukwazi ukongeza izibane zokubonakala okongeziweyo.
Jonga le garaji yesithuthuthu ephathekayo apha IAmazon
Ngelixa iigaraji ezinobungakanani obugcweleyo bemoto zilingana neemfuno zabaqhubi abaninzi, zinokuba sisakhiwo esikhulu ngokungeyomfuneko kubanini bezithuthuthu. Emva kwayo yonke loo nto, aba bantu banamakhaya abadingi ndawo ingako yokugcina nokukhusela izithuthi zabo.
Yiyo loo nto iigaraji zezithuthuthu eziphathwayo zibaluleke kangaka. Abafuni ububanzi obufanayo ukukhusela isithuthuthu, ke oku kunokukugcinela indawo kwindlela yakho yokuhamba okanye eyadini. Ngeengcebiso ezininzi, abanini bezithuthuthu baya kufuna indawo yokugcina ubuncinci eyi-6 'x 8' ukugcina isithuthuthu ngaphandle kwemozulu.
Jonga le garaji IAmazon
Iigaraji eziphathwayo zinezibonelelo ezininzi ukusuka ekusebenziseni ngokulula ukuya kwiindleko zegaraji. Nangona kunjalo, enye into enkulu ekufuneka uyiqwalasele kukuba ukuthengwa kwegaraji ephathekayo kuya kuhlala ixesha elingakanani. Emva kwayo yonke loo nto, ukuba kufuneka ubeke endaweni yakho kwigaraji yakho ephathekayo, awugcini mali.
Ngethamsanqa, ukuba uthenga igaraji enomthwalo onzima, iya kukugcina ngaphakathi kweminyaka eli-10 ukuya kwengama-20. Ubomi obuchanekileyo buxhomekeke kwizinto ezimbalwa ezinje ngomgangatho wegaraji ephathekayo, izinto ezenziwe ngazo, iimeko ezivezwa kuzo, kunye nendlela egcinwe kakuhle ngayo.
Xa usakha isakhiwo, njengegaraji esisigxina, yemveli, uyakufuna imvume. Nokuba uyakha kwipropathi eyeyakho, uya kufuna imvume ekhethekileyo yokuqalisa ukwakha. Nangona kunjalo, oku akunjalo kwi-carport ephathekayo. Ukuba ufuna ukuba ne-carport ephathekayo kwipropathi yakho, awudingi ukuba nexhala malunga nokufumana imvume yokuqhubeka. Nangona kunjalo, ukuba uhlala kwindawo enombutho wabanini bamakhaya licebo elihle ukuba ujonge nabo ukuqinisekisa ukuba une-carport okanye igaraji ephathekayo ayihambi ngokuchasene nayo nayiphi na imigaqo yabo.
Jonga le canopy iphathekayo kwi IAmazon
Olunye lolona khetho lubalaseleyo xa ufika kwiigaraji eziphathwayo yi-Abba Patio Storage Shelter. Iza ngobukhulu obune kubandakanya imilinganiselo ye-6 'x 8', 7 'x 12', 8 'x 14', kunye ne-10 'x 10'. Ngolu khetho oluninzi, unokukhetha okuninzi ukukunceda ufumane ubungakanani obufuna ngokobuqu.
Igaraji yenziwe ngefreyimu yentsimbi egutyungelwe ngumgubo kunye ne-polyethylene. Oku kugcina igaraji ikhuselekile kurusi, umhlwa, kunye ne-UV kunye nokukhusela imoto yakho kunye nezinto zakho nakwesiphi na isimo sezulu esibi. Yenziwe ukuba kube lula ukuseta, ukuwa, ukuthuthwa, kunye nokugcina okwenza ukuba iphatheke ngokwenyani.
Jonga le inshorensi yenqwelo mafutha IAmazon
Ukuba uhlala kwimozulu ebandayo, unokuba nexhala malunga nomthwalo wekhephu kwimoto yakho kunokuba ukhuseleke konke. Kule meko, i-carport efana nePalram Vitoria Carport kunye nePatio Cover lukhetho olukhulu.
Indawo yokuhamba ngenqanawa i-16 'x 10' x 8 'kwaye ingwevu. Ngelixa ingenazindonga, inophahla olwenziwe ngeepaneli ze-6 mm zepolycarbonate. Ezi paneli azizukuqhekeka phantsi kobunzima bekhephu elinzima kwaye ziyaqhekeka. Kuba zikwabonisa ukukhuselwa kwe-UV, awuzukuba naxhala lokutshintsha kombala ngokuhamba kwexesha. Ngewaranti yeminyaka eli-10 yabathengi base-US, unenetha lokhuseleko ukubuyela kule carport nayo.
Ngolwazi oluthe kratya, jonga inqaku lethu malunga iqhotyoshelwe kwiigaraji ezihlukanisiweyo .
izipho zabaneminyaka eli-18 ubudala
yimalini isithembiso isangqa kwiwalmart
Kunye nobukhulu belokhwe yomfazi olilokhwe
iingoma zomdaniso weklasikhi yokuqala
gcina umhla kunye nezimemo zomtshato